बाथरुम भित्र तपाँई के गर्नु हुन्छ ! – ToplineKhabar
बाथरुम भित्र तपाँई के गर्नु हुन्छ !
November 5, 2017 प्रदीप भट्ट0Comment
आजको जमानामा मोबाइल फोनविनाको जीवन अधुरो नै हुन्छ भन्दा फरक पर्दैन । मोबाइल जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । खाली समय मिल्यो कि गोजीबाट मोबाइल फोन निकालेर इन्टरनेट खोलिहाल्छौँ हामी । सायद मानिसले मोबाइल फोन नचलाउने त्यस्तो कुनै ठाउँ नै छैन, चाहे त्यो शौचालय होस् वा अन्तरंग कार्य गरिरहेको शयन कक्ष ।
एक नयाँ तथ्यांक अनुसार, ४० प्रतिशत युवायुवतीहरुले आफ्नो अफिसको बाथरुममा समेत मोबाइल फोन चलाउँदछन् । सर्भेअनुसार अफिसको बाथरुमभित्र मोबाइल चलाउनेमध्ये ५५ प्रतिशतले फेसबुक चलाउने तथा ४३ प्रतिशतले ह्वाट्सएप चलाउने गर्छन् । तीमध्ये नै ४० प्रतिशतले ट्वाइलेट बसेर अनलाइनमा समाचार वा अन्य कुरा पढ्दछन् । १३ प्रतिशतले क्यान्डी क्रस खेल्नका लागि ट्वाइलेटमा मोबाइल चलाउँछन् भने ११ प्रतिशतले पोकेमोन गो खेल्दछन् ।
← किन लिईन ओलीले उमेदवारि फिर्ता
बाम एकताका बेला क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष गौतम मकवानपुरमा यसरी गर्जीए →
July 28, 2017 प्रदीप भट्ट 0
December 23, 2016 प्रदीप भट्ट 0
चम्चा डुबाउँदा ठाडै हुने अनौठो चियाको रहस्य